Indlela yokuchonga ukuba intsana ayidli
Unina olungapheliyo unina unina ezinyangeni zokuqala emva kokubeletha. Uxhalabisa yonke into, kwixabiso lobisi elitholwe ngumntwana kwaye iphelile ngokuchaneka kokukhetha i-cap for crumbs.
Kwaye kulungile, ke inkwenkwe ihamba kakuhle, izandla ezithandekayo nezothando. Umama onjalo uya kusebenzisa zonke izinto ezinokucingwa kwaye ezingenakucinga, ukuba umntwana wakhe ufumane okusemandleni akhe. Kuba ngumama onjalo, umama luvuyo olukhulu nolonwabo. Unina onomdla uya kunqoba zonke iingxaki endleleni yakhe nangendlela yomntwana.
Ungazi njani ukuba umntwana uzele
Ngoko, umama waqala ukukhathazeka malunga nemibuzo, kodwa umntwana uyadla, ubisi lwebele, indlela yokufumanisa ukuba umntwana akayi kutyhubela kwaye ingakanani ixesha lokumfaka ngeengcingo? Iimpendulo kule mibuzo zilula, ziyakwazi ukuphendulwa ngumama ngokwawo, kunye nomgudu omncinci kunye nokuqwalasela okuphezulu.
Okokuqala, kufuneka uqaphele ukuba umntwana wakho uyaphila. Ukwenza oku ngenye imini uya kufuneka ulahleke ngokupheleleyo i-diapers ehlawulelwayo kwaye ubeke endaweni yazo ngeempuphu. Umntwana othi, ukususela malunga neveki eli-1 ubudala, kufuneka ahlambele ubuncinci ubuncinane be-6-8, kunye ne-diaper kufuneka imiswe ngokugqithiseleyo, ukuba ayinamanzi kakhulu, ngoko-ke i-diapers ezinjalo zingabalwa enye. Ukuba le nani inye, ngoko umntwana uzele ngokupheleleyo. Kodwa idatha yale ngcaciso iya kuba yelungileyo kwaye ichanekile ukuba umntwana ufumana ubisi lwebele kuphela, ukusetyenziswa kwamanzi kunye nayiphi na imishanguzo ngaloo mini ayifakiwe, ngaphandle koko ulwazi aluyi ku thembeka.
Okwesibini, isantya sokuxhamla umntwana lwakho sinokulawulwa ngokuzuza ubunzima. Inkwenkwe ephakathi kweveki kufuneka izuze malunga ne 125 grams, kodwa kungcono ukuba lo mfanekiso uza kufikelela kwi-200-300 amagremu. Ukuba ubunzima bentsana kwinyanga kuphela ngama-gramu ayi-500, le sizathu sokwesaba nokubonisana ngokukhawuleza kogqirha. Kuphela xa umntwana ephotshiwe, kufuneka ususe zonke iimpahla ezivela kuso, ukuya kwi-diaper.
Okwesithathu, thobela intlalontle yomntwana, ukuba uvuyo olusebenzayo, evuya ngexesha lokuvusa, akukho nto yokukhathazeka ngayo, uyonwabile ngokwenani lobisi afumanayo. Ngokuqhelekileyo abantwana abangenawo ubisi banomsindo kakhulu, bodwa kwaye bengasebenzi.
Sathetha malunga nendlela yokuqinisekisa ukuba umntwana akayidli. Kodwa ukuba, emva koko konke, uMamochka unomuvo wokuthi umntwana wakhe akanalo ubisi oluseleyo, kufuneka ukuba kwenziwe, amanani amanyathelo azakukunceda ukwandisa i-lactation. Okokuqala kufuneka uqinisekise ukuba umntwana usesikweni esifanelekileyo xa usondla. Ukuze ube nobisi obuninzi, kuyimfuneko ukondla umntwana ngokufunwa, ukugcina umntwana ixesha elide, ukuba ufuna kangakanani. Kuqhelekileyo impazamo yamama ukuba iqala ukunyusa umntwana ngexesha elichanekileyo kwaye imizuzu engama-15-20 kuphela, mhlawumbi i-stereotype evela kwindlela yokutya okufakwayo. Ngokutya okufakelwayo, uyazi kakuhle ukuba umntwana wakho uncelise njani ubisi, kwaye kwimeko yesondlo esingokwemvelo, akukho ntembelo enjalo, ngoko ubeka umntwana rhoqo kwibele (kwiiyure eziyi-2-3, kodwa kukho nezo zifuna iintsasa nganye ihora). Umzimba wesifazane ulungiswe kakuhle, ukuba umntwana ude esifuba, ke lo ngumqondiso wokuthi akayidli, ngoko ukuveliswa kwebisi kukhula. Enye into ebaluleke kakhulu echaphazela ubuninzi bebisi lwebele, le yimeko yomzimba kunye nengqondo yomama, umama osemncinci kufuneka abe nokuphumla okulungileyo, ukulala kakhulu, aze azincwane. Kufuneka ikhutshwe kuzo zonke iingxaki ezingenakwenzeka kwaye ezingathandekiyo. Umama kufuneka asebenze kakhulu emoyeni omtsha, ngokukodwa ukuphucula ukuvuthwa komzimba emzimbeni omtsha. Unomdla kakhulu oomama kufuneka banike ukutya kwabo, ukutya kufuneka kube nokulinganisela, izithambile ezityebileyo kunye neemaminerali, kunye neenombolo ezininzi zeeprotheni kunye namafutha. Enye yezona zinto ziyinhloko zobisi lwebele lubanzi, ngoko ke umfazi kufuneka athathe ubuncinane ii-2 ilitha zamanzi ngosuku. Kwiinyanga zokuqala zobomi, umntwana akufanele aphethwe, ngenxa yokuba umntwana ufumana yonke into ngobisi lukanina, ukuba unengcamango yokuba umntwana ufuna ukusela, ulinike isifuba esingcono, oku kuya kuba yinto eyongezelelekileyo yokuvelisa ubisi obuninzi. Ngokuqhelekileyo cinezela umntwana wakho ecaleni lakho, njengokuba udibaniso olufanayo olufanayo (njengoko luboniswe ngabahlengikazi bezilwanyana) lukhuthazo oluqinileyo lokwandisa ukuhlamba. Kufuneka umondle umntwana ngokuhlwa, kwaye ungabandakanyi yonke i-pacifiers kunye neebhotile, ukuba kukho isidingo sokunika umntwana umbane, sebenzisa i-spoon okanye ipipette.
Ngokuqhelekileyo unokuva, phakathi kwamantombazana amancinci, ukuba izixhobo zonyango eziphumelelayo ngexesha lokunciphisa ubisi ziintlobo ezahlukeneyo zemifuno kunye neetas. Izona ziqhamo ezidumileyo ziinkonzo ezifana ne-nettle, idill, i-cumin, i-fennel. Bathi iifom ezenziwe ngesiseko seelnut zinceda kakhulu. Kodwa konke oku kungenye inkolelo, ukuphuculwa kobisi kuthinta kuphela i-hormone. Ubuninzi bokuthi i-lacto-gasses iyatshintsha yinto enokwandisa ubuninzi bebisi, ngokunyusa uketshezi oludliwayo, kwaye ngokubanzi kunokwenzakala kwengqondo. Njengomthetho, ama-mums ancedwa ngeendlela ezihlwayekileyo - akhulisa umzila weemvakalelo ezintle; akunakulungi kakhulu-kunika ukuqonda ukuba ngumbingelelo wezinto ezilungileyo zomntwana, ukuzithemba kuphakama, kwaye ngenxa yoko, ukuvela kwemvakalelo emihle; Ubunzima - umlinganiselo omkhulu womsebenzi owenziweyo, okufanayo kuphucula umoya, ukuphazamisa kwiingcinga ezibuhlungu.
Into ephambili kukuba umama osemncinci ukhumbule ukuba ukuncelisa isilumkiso sempilo nenhlalakahle yomntwana wakhe, ngoko kufuneka enze konke okusemandleni akhe ukugcina ubisi lwebele ngokukhawuleza.
Indlela yokubuyisela umntwana ukuba ancelise
Ubisi lwebele lubona kukutya okulungileyo kunane
Iintsana kufuneka zibe nekontra yokunceda abantwana yokuqala
Ukuphindaphinda rhoqo umntwana. Unokumisela njani umgangatho wengozi?
Ukutya okunyanzelekileyo ukulahleka kwesisindo: i-pros and cons of nutritional fraction
Indlela yokwenza umntu akholelwe ukuba uyona mhle
I-Casserole nge-turkey kunye ne-spaghetti
Iipancakes ngamabhontshisi amnyama kunye nengqolowa
I-Herpes kubasetyhini besini
Ukukhulelwa kubonakala ngathi?
Ikhekhe ephosiweyo kunye neetayibisi kunye no-anyanisi
I-Biography yomdlali weeLonid Bykov
I-Lipstick ekhulisa umlomo wemilomo
Ungathini isibindi emva komtshato?
Ukuzivocavoca ekhaya kunye nama-dumbbells